ISIMEMEZELO – united front
ISIMEMEZELO SOKULUNGISELELA UKUHLANGANYELA KWEUNITED FRONT
EGoli MHLAZINGU14 kuZibandlela 2014
MhLAZINGU14 kuZibandlela 2014
Emhlabeni wonke sibhekene nenzukayizeki engalawuleka yezonotho engazange ibonwe kusukela isikhathi Sengcindezi Enkulu yangeminyaka yama1920s. Izimpi Kanye nokuvukelana kwemibuso umzila wakho ohamba kusuka eMiddle East kuya eMpumalanga neAfrika Kanye nasemazweni aseMelika. Ukubuswa ngamanye amazwe akunakumkhawulo. Ukucekeleka phansi okukhulu kwezemvelo Kanye nenkinga yokushintsha kwesimo sezulu kudalwe wuhlelo longxiwankulu olubhubhisa kwasani endleleni yalo ngisho ukuphila kwabantu uqobo.
Ubungxiwankulu obenzeke emva kokuqunjwa phansi kombuso wobandlululo bushiya umzila wokungalingani ngempilo, indlala, ubuphofu kanye nosizi. Izicebi zababusi kanye nabaphathi bezimboni –abamhlophe nabamnyama – bayanqaba ukuvumela okuncane-nje kwizidinga ezisheshayo zabantu abaningi. Babona ngisho ushintsho oluncane njengendlela engaba ukusababisa ukuzuza kwabo. Uhulumeni weANC manje ulokhu ubelesela ngalemibono. Noma yiluphi uhlelo olunenqubekela phambili kuyayekwa nona kuvele kushiwe kanjalo nguhulumeni ngenxa yomqondo wokulawula umbuso ononya wongxiwankulu. Uhulumeni weANC uyanqaba ukubhekana nongxiwankulu kanye namalungelo abamhlophe kodwa esikhundleni salokho wenza kube lula ukuthi ukulawulwa kwezimali ngabamhlophe kanye nabalingani babo abangabaningi beBEE. Lokhu kuyisizinda sezinkinga ngezombusazwe ezibhekene nezwe lakithi.
Kusukela mhlazingu13 kuya mhlazingu14 kuZibandlela eGoli izihambeli ezingu350 ezazimele izinhlangano ezahlukahlukene zabasebenzi, ezanhlalakahle emiphakathini, ezinedumela, ezenkolo, ezingaphandle kukahulumeni kany enemibuthano emelene nongxiwankulu ezweni lonke bahlangana ukubeka isisekelo sombuthano ohlangene wabantu abaningi abahlwempu ukubhekana nohlelo oselwenze iNingizimu Afrika izwe elingenakho ukulingana ngamazinga okuphila okukhulukazi emhlabeni wonke.
Isiqubulo Sokuhlanganyela Ukuzilungiselela kweUnited Front sithi KWANELE, KWANELE, ENOUGH IS ENOUGH, GENOEG IS GENOEG.
Isimemezelo sethu esiqsuka kulokukuhlanganyela okuyingqopha mlando kungene egiyeni Elisha kubantu bakithi ukuthi bahlangane kulonyaka weUnited Front. Umsebenzi wethu ukwakha ukuzimbandakanya emzabalazweni eNingizimu neAfrika kanye nasemhlabeni. Singaba womhlaba wonke.
Siqala uhambo olusha lokuthi sibhekane nezingqinamba ezimbi kakhulu zesikhathi sethu futhi sihlanganise imizabalazo yabantu bakithi: abasebenzi, abangasebenzi, abaesifazane kanye nabasha ukuyenza isabalale ukuze sinyakazise futhi sivukise lelizwe.
Siyazethemba ukuthi iminyakazo yethu izozwakala eNingizimu Afrika futhi igcine isisabalele kwizwekazi lonke lasseAfrika.
Ngesikhathi sigxile kwimibuthano yobuqhawe yezikhathi ezedlule, kwimizabalazo ukwenza izinhlelo ezinjenge Freedom Charter kanye nezinye, iUnited Front iya kubantu; futhi iqhamuka nendlela yokuhlanganyela okunedumela ukuhlanganisa izimfuno zabantu bakithi, ukulalela nokwakha ukuhlanganyela okungokwabantu, okwabantu futhi okulawulwa ngabantu. IUnited Front izohlanganisa abasebenzi, abahlali basemaphandleni kanye nabahlali basemadolobheni emzabalazweni futhi lapho abesifazane kanye nabasha kuyoba ibona abaphambili.
Sihlanganile ngenxa yokuphuthuma okukhulu njengeUnited Front futhi sihlanganyela ukwahlakana kwethu kanye nemizamo yethu enhlakanhlaka, ukwakha ubumbano, ukubuyisa ithemba kubantu abaningi bakulelizwe. Ukwakha abasebenzi kanye namandla anedumela kusenhizweni yalokhu esikuqalile.
IUnited Front ingumbuthano womnyakazo wabantu kanye nomzabalazo. Ezweni lonke abantu, ezindaweni esisebenza kuzona, emalokishini kanye nasemaphandleni bayakhankasa bemelene nobubha, nokungalingani kanye nenkohlakalo, Indima yethu ukuhlanganisa kanye nokuhlela lemizabalazo.
Njengezishoshsovu zeUnited Front umsebenzi wethu ophambili nowokuqala ukwakha izinhlangano ezikhankasela ukulwa nenkahlakalo, ukwebiwa kwezinsiza zomphakathi, ukuhluleka kokulethwa wezinsiza emphakathini, ukwenyuka ukubusa okungenabulungiswa, udlame olubhekiswe kwabesifazane, izingane kanye nongqingili phecelezi LGBTI, unya lwamaphoyisa, kanye nemigomo yezomnotho emelene nabahlwempu futhi ebhekelela abacebile (“ubungxiwankulu’’); Sizophikisana nokudilizwa emsebenzini, nokunqanyulwa kwezikhathi zokusebenza, ukususwa lapho sihlala khona, ukuwa kwezindlela zezemfundo kanye nezempilo kanye nokwenziwa ngobuzwe kwezindawo zasemaphandleni.
Umnyomo wethu ukuthi siphikelele ekujuliseni intando yeningi kanye nokwakha amandla abantu kwizinhlaka zezenhlalakahle, kwezomnotho kanye nezombusazwe lapho ukuhlanganyela kwezidingo zabantu zizonke izona ezihamba phambili zoke ngaphambi kwenzuzo kunezidingo zababusi;
Sibiza abasebenzi, abangasebenzi, abesifazane kanye nolusha, abahlala emikhukhwini, abasebenza amapulazini, abangenamhlaba kanye nabaphucwe umhlaba, ukuthi banhlangane ukwakha inited front kuwowonke amajika ezwe.
Okuphambili kwisizinda sezenhlalakahle, ukuthi injini kanye nesitimela seUF kufanele kusetshenziswe kakhulu, kucindezelwe – ikakhulukazi abasebenzi, abazisebenzelayo/nababuye bangasebenzi kanye nabangasebenzi emadolobheni kanye nasemaphandleni, ngokunjalo kanye nabesifazane kanye nolusha.
Ukuhlanganyela okukhulu kwabantu abacindezelwe kanye nabaxhashazwayo kufanele kube yikho uqobo okuyilimi lokukhanganyela neUF. Lokhu kumbandakanya izinhlangano zabasebenzi, izinhlangano zezenhlalakahle, ezemiphakathi, izinhlangano zabesifazane, ezabafundi kanye nezinhlangano zabasha, kanye nezinye izinhlangano ezinamalunga agcwele iningi labantu.
Bonke labo abavumelanayo futhi nabamukela umbono, umgomo, uhlelo, imisebenzi kanye nokuzibophezela kweUF bayovunyelwa ukuthi babe yingxenye yeFront yethu.
Njengombuthano khanhasayo futhi olwayo, iUnited Front izolokhu ivela nemikhankaso kulokhu okulandelayo: imisebenzi, umhlaba nokudla, ezemvelo, ululethwa kwesidingo ezifanelekile kubantu (ikakhukaz izindlu, ezemfundo, ezempilo, amanzi kanye nezokuhlanza indle) kanye nodlame kubantu besfazane, izingane kanye nomphakathi wongqingili. Kuze kube manje iUnted Front izosungula amaqembu ambalwa azohlanganisa izinhlangano kanye nemizabalazo myalenana nalokhu, kunwabe ngezindlale zokukhankasa. Phakathi kwamanje kanye nangesikhathi sokwethula ngokusemthethweni kweUnited Front sizohlangana kumzabalazo wokwehliswa kwebhajethi yezwelonke kwimali esetshenziswa ukuthuthukisa abantu, ikakhulukazi mayelana nezindaba ezibhekene ngqo nabantu abahlwempu ngenyanga kaNhlolanja mhlazingu25. Siyohlanganisa usuku lomnyakazo omkhulu wabantu ngenyanga kaNdasa mhla zingu21 ukuvikela amalungelo oluntu, ukukhuluma ngokukhululekileyo, ilungelo lokuhlangana kanye futhi simelane nolunya lwamaphoyisa.
Sinikeza isaziso iJaji uFarlam ukuthi iUnuted Front izobe ibheke imiphumela yeKhomishani yaseMarikana yoPhenyo. Asifuni lutho ngaphandle kobulungiswa ngeMarikana! Lokukuhlanganyela Kokuzilungiselela sekubeke Ikomidi LikaZwelonke Lokusebenza (phecelezi iNational Working Committee) ukubhekelela ukwenziwa kwezinqumo kanye ikakhulukazi ukulungiselela ukusungulwa okusemthethweni kweUnited Front kusukela zingu25 kuya ku27 ngenyanga kaMbasa ngonyaka ka2015.